Bogga ugu weyn Lacag Bixin Si Aad Ugu Gudubto Gobol Kale: 10 Meelood Oo Ugu Fiican Oo Si Fiican U Bixiya 2022
Ma ogtahay in lacag lagu siin karo si aad ugu guurto gobol kale? Miyaad ka daashay socdaalka? Ma rabtaa inaad tijaabiso jawi shaqo oo cusub? Welwelkaaga ku saabsan guuritaanka iyo helida meel waa la daryeeli karaa markaad aqbasho shuruudaha iyo shuruudaha lagu siinayo inaad u guurto gobol kale gaar ahaan 2022.
Haddii aad xiisaynayso meelo cusub oo aadan ka baqayn isbeddel, markaa waxaad dooran kartaa in lagu siiyo lacag si aad ugu guurto gobol kale. Miyaad si fudud uga baxaysaa dhaqaalaha laakiin aad diyaar u tahay inaad tijaabiso nolosha xaalad kale? Haddii ay haa tahay jawaabta mid ka mid ah su'aalaha kore, markaa waxaad haysataa sabab aad lacag ku hesho si aad ugu guurto gobol kale.
Sababaha mushaharka lagu qaato si loogu guuro gobol kale
Lacag helista si aad ugu guurto gobol kale waxay noqotay ikhtiyaar sababo badan awgood. Waxaa laga yaabaa inaad la yaaban tahay sababta lacagta lagu siinayo si aad ugu guurto gobol kale.
Gobollada qaarkood waxay si fudud u raadinayaan dad buuxiya booska bannaan ee bannaan. Qaar waxay isku dayayaan nidaamyo farsamo oo cusub waxayna u baahan yihiin dad shaqeeya oo adeegsada hal -abuurka, sidaas darteed lacag ayaa lagu siinayaa si aad ugu guurto meel kale.
Faafida corona waxay ka dhigtay ka shaqaynta guriga mid dhab ah sanadka 2022. Shirkado badan ayaa raadinaya shaqaale ka shaqayn kara guriga ama waydiisanaya shaqaalahooda inay ka guuraan xafiiska.
Haddii aad hore u xaddidnayd markaad ka tagtay guriga oo aad aadi lahayd shaqada laga yaabee cidhiidhiga qoyska ama dhaqaale awgood, hadda waxaad si fudud u heli kartaa gobol ku siin doona lacag aad ku guurto.
Lacag intee le'eg ayay tahay inaad keydiso si aad u guurto?
Dhawaaqa in lacag lagu siiyo si aad ugu guurto meel kale ayaa kaa dhigi karta inaad u malayso inaadan u baahnaan doonin lacagtaada si aad u hirgaliso riyadaada guuritaanka. Ha ku kadsoomin dhiirrigelinta. Guuritaanku wuxuu noqon karaa mid aad qaali u ah.
Adiga, haddaba, waa inaad si fiican u qorshaysaa maaliyaddaada ka hor intaadan aqbalin in lacag lagu siiyo si aad ugu guurto gobol kale. Halkaan waxaa ah siyaabo lacag lagu helo oo loo keydiyo dhanka dib u dejinta:
Hayso koonto bangi oo kuu gaar ah lacagaha dib -u -dejinta. Tani waa inay ku jirtaa qorshaha sannad ama laba sano, si loo helo wax ku filan. Si kastaba ha noqotee, haddii aad leedahay il deeqsi ah oo deeqsi ah, kala qaybsanaanta akoonnada ayaa si fiican u fiicnaan doonta. Si aad dib ugu bilowdo, celcelis ahaan muwaadin Mareykan ah wuxuu u baahan yahay qiyaasta $ 1,000,000 sanadka ugu horeeya. Si kastaba ha noqotee, markaad degto, kharashyada ayaa yaraan doona.
Ku hagaaji lacag joogto ah koontada oo hubi inay korayso. Waxaa laga yaabaa inaad rabto inaad isticmaasho xisaabaadka bangiga ee dulsaarka ugu fiican leh kiiskan. Tani waxay kuu sahlaysaa inaad shaqaysato isla markaana aad keydsato waqti isku mid ah.
Soo hel a shaqo dhinac ah intaad sugayso dib -u -dejin. Guuritaanku wuxuu noqon doonaa burbur iyo jebinta jeebka xitaa haddii qofku haysto lacag badan oo uu ku raaxaysto wax walba. Marna ma garanaysid waxa laga filan karo gobol cusub, sidaa darteed waxaad ammaan u tahay inaad ka faa'idaysato dhulka la yaqaan ka hor intaadan aqbalin guuritaanka.
Sideed Ku Heleysaa Shaqo Intaadan Guurin?
Aqoonta saxda ah iyo aqoonta saxda ah ee aad raadinayso, shaqo ka helidda gobol kale ma adkaan doonto. Xitaa ka dib marka lagu siiyo lacagta si aad ugu guurto gobol kale, waxaad u baahan doontaa shaqada si aad naftaada u sii wadato. Waxaad u baahan tahay inaad la xiriirto meesha aad u guureyso iyo fursadaha jira.
10 Meelood oo Si Fiican u Bixiya 2022
Ma jeceshahay xagaaga? Halkan waxaa ah meel aad la kulmi doonto qorraxda maalinta oo dhan iyo qeyb weyn oo habeenka xagaaga ah. Alaska waxaa la sheegaa inay tahay Gobolka ugu quruxda badan Mareykanka. In lagu siiyo lacag si aad ugu guurto Alaska waa uun keega.
Alaska waxay leedahay qiimayaasha ugu jaban ee Real Estate guryahana waa kuwo heer sare ah oo la awoodi karo. Dhab ahaantii waxaad yeelan kartaa aragti kaamil ah, guri ku habboon oo xirmo saaxiibtinimo leh leh. Mushaarkaaga joogtada ah waa $ 1600 inta aad ku nooshahay Alaska.
Waxaad ku raaxeysan doontaa nolol canshuur la'aan ah dakhliga iyo iibka labadaba. Tani waxay kuu keydineysaa lacag markaad isku daydo inaad cagahaaga ka hesho gobolka. Sababta ugu weyn ee loo aqbalo in lacag lagu siiyo u guurista Alaska waa dhererka xiisaha iyo madadaalada meesha ugu quruxda badan. Waxaa laga yaabaa inaad rabto inaad tan tijaabiso haddii aad tahay qof dibadda ah.
Eeg Sida Ganacsi Looga Bilaabo Alaska: Habka Tallaabo-tallaabo ah
#2. TULSA –OKLAHOMA
Halkan waxaa ah Dawlad aan si fiican kuugu siin doonin inaad u guurto 2022 laakiin sidoo kale ku habboon qoyskaaga. Tulsa waxay ku taal aagagga Waqooyi-bari ee Oklahoma waana magaalada labaad ee ugu weyn.
In kasta oo ay aad u weyn tahay oo firfircoon tahay, haddana waxay leedahay dareen isku xidhan oo ah magaalo yar oo la wadaago. waa meel saaxiibtinimo lagu koriyo carruurta. Ma seegi doontid shaqo suuqa weyn ee Tulsa. Beeraha iyo ugaadhsiga, oo ku dhex jira waxyaalaha casriga ah ayaa Tulsa ka dhiga magaalo casri ah oo dal taabasho leh. Hadday Tulsa bini -aadam tahay, waxay ahaan lahayd mid xasiloon!
#3. DUQAHA - ALABAMA
$ 10,000 waa waxa laga yaabo inaad hesho si aad ugu guurto Shoals. Lacagta wanaagsan ka sokow, ka fikir inaad meel fog ka shaqeyso guryaha xeebta! Haddii aadan jeclayn xeebaha, magaaladu waa heer sare oo dhakhso badan.
Waxaad xaq u leedahay inaad doorato qayb kasta oo ka mid ah Shoals -ka aad rabto inaad degto. Shoals -ku wuxuu ku siinayaa fursad aad meel fog uga shaqayso mashaariic kala duwan.
#4. BALTIMORE MARYLAND
Waxaad awoodi doontaa inaad hesho deyn la cafin karo oo gaareysa $ 5000 si aad guri uga iibsato Baltimore. Kani waa magaalo dillaacyo cusub. Haddii aad tahay qof biyo ah, oo soo jiitay qorrax -dhaca dekadda, markaa kani waa meeshii adiga. Dawlad madaxbannaan, canshuurtu way yar tahay oo markaa qiimaha nolosha.
Guryaha la dayacay waxay ku tartamayaan ku dhawaad ​​bilaash! Ma heli doontid lacag aad u badan marka aad aqbasho lacag bixinta si aad ugu guurto Baltimore laakiin waxaa laguu balan qaadayaa nolol jaceyl oo jaban iyo fursado badan oo aad naftaada hodan ku noqon karto.
Dhallinyarada heegan! Haddii aad hadda dhammeysay dugsiga oo aad la yaaban tahay waxa lagu sameeyo aqoontaada cusub, oo aad si fiican u hesho mushaharka, markaa fursad u hel Vermont. Vermont waxay beegsanaysaa shaqaalaha dhallinyarada ah sannadka 2022. Waxaa lagu siin doonaa dhiirrigelin aad meel fog ka shaqayso.
Waxaa jira deeq shaqaale fog ah oo dhan $ 10, 000, si loogu isticmaalo guuritaanka. Vermont waa xasilloon oo madadaalo leh, oo ay ku yaalliin baararka waaweyn iyo makhaayado nolol habeennimo la yaab leh ka dib maalin dheer oo ay ka shaqeynayaan gudaha!
#6. NEWTON – IOWA
Miyaad ka daashay wareegga? Lacag hel si aad si joogto ah ugu degto Newton! Gobolka Iowa wuxuu ku siin doonaa $ 10000 si aad u iibsato guri oo aad degto halkan muddo dheer. Marka lagu daro 10K waxaad heli doontaa $ 3000 si ay kaaga caawiso dejinta. Waxay ugu yeeraan xirmo soo dhaweyn leh.
Magaaladan xeebta ah ayaa aad uga jaban marka la barbar dhigo magaalooyinka kale ee xeebaha ah maadaama dhisitaanka guri riyo ah halkan kugu kici doona kaliya $ 105,000.
Kani waa hoy ammaan u ah qoysaska iyo korinta carruurta. Kuwa arkay dhammaantood, oo dhammaantood sameeyay sannadka 2022, waxay ugu dambayn heli karaan lacag si ay u degaan Newton, Iowa. Jardiinooyin la yaab leh, waxqabadyo madadaalo leh oo loogu talagalay lamaanayaasha iyo carruurta ayaa loo tartamayaa!
Maine waxay maalgelinaysaa shaqaale da 'yar oo hadda dhammaystay kulliyadda si ay u sii joogaan Maine ama u soo guuraan halkan. Waxay bixisaa deyn canshuureed si ay u helaan qalin -jabiyayaal ku sii sugnaada gobolka waxayna ballaarisay xuduudaheeda gobollada kale. Waxaa lagu siin doonaa lacag si aad u guurto, oo aad yeelato cashuur dhaaf.
Lacagtu way kala duwanaan doontaa sannadkaaga qalin -jabinta, illaa aad tahay qof u dhashay Maine iyo haddii kale. Si kastaba ha ahaatee, shaqaaluhu waxay awoodi doonaan inay bixiyaan amaahda waxbarashada ilaa $ 377 bishiiba. Waa mid aad u jaban oo madadaalo leh meelaha xiisaha leh ee la booqdo gaar ahaan shaqaalaha dhallinyarada ah.
#8. WAQOOYI -WAQOOYI - NEBRASKA
Nebraska waa meel loogu talagalay ganacsatada. Dadka u nugul kobcinta dhaqaalaha iyo qorshayaasha maalgashiga waxay fursad u haystaan ​​inay halkan ku noolaadaan oo ay wax ku biiriyaan dhaqaalaha kobcaya.
Milkiilayaasha shirkadu waxay helaan lacag si ay halkan ugu soo guuraan oo ay u helaan ilaa $ 5000 oo gunno ah shaqaalayaasha cusub. North Platte waa mid aad loo awoodi karo. Magaaladu waxay caan ku tahay qiimo jaban ee maciishadda iyo in la awoodi karo oo aasaaska u ah.
#9. HAMILTON OHIO
Awooweyaasha kulleejku waxay fursad ka helaan Hamilton, Ohio. Waxaa lagu siin doonaa $ 10,000 si aad halkan ugu guurto haddii aad hadda qalinjabisay. Tani waa bar bilow wanaagsan maadaama aad fursad u heli doontid inaad iska saarto deymahaaga waxbaridda marka aad ogaato fursadaha xirfaddaada.
Waxaad ka heli doontaa barnaamijyo kor u qaadaya kartidaada halkan, haddii aad qalinjabisay wax ka yar toddoba sano ka hor. Hamilton wuxuu siiyaa fursado ardayda ka qalin jabisa sayniska, farsamada, injineernimada, xisaabta iyo Farshaxanka sidoo kale waxay daboolayaan aragti ballaaran.
#10. CHATTANOOGA, TENNESSEE
$ 1,250 waa waxa lagu siin doono si aad ugu guurto Chattanooga haddii aad tahay guruug farsamo. Tan waxaa dheer $ 10,000 oo ah daynta guryaha la iska cafin karo.
Si kor loogu qaado dadkeeda tiknoolajiyadda ku wanaagsan, magaaladu waxay durba kor u qaaday shabakadeeda gigabyte si ay ku dejiso. Tani waa meel saaxiibtinimo u leh qoyska iyo shaqaalaha keligood ah.
Waxaa jira fursado badan oo magaalooyin kala duwan loogu talagalay kooxo kala duwan oo dad iyo xirfadlayaal ah oo ku nool USA. Iyada oo masiibada ku habsatay adduunka, ka shaqaynta meel fog ayaa ah caadada cusub. Waxaan jeclaan lahaa inaan heshiis la galo wakhti kasta, si aan lacag u helo si aan ugu guuro gobol kale oo aan uga shaqeeyo raaxada gurigayga.
Baadhitaanno La Xiriira:
Sida Looga Guuro Guriga Waalidiintaada | Fudud Waxqabad
2022 Lacagta Isboortiga: Halkee ayay ka timaadaa iyo xagee tagtaa?
Ma ahan wax cusub in la yiraahdo waxaa jira lacag isboorti. Iyadoo tiro wanaagsan oo ciyaartoy, naadiyo, iyo…
Haddii aad raadinayso xoogaa hacks lacag-abuur ah oo dhaqso kuugu heli kara lacag, waxaad timaad…
Sida Loo Adeegsado Jeegaga Ballaadhan Si Loogu Muujiyo Lacagtaada 2022
'Sirtu' waxay faafisay fikradda jeegaga badan iyo sida ay lacagta u muujiso. Sida ninka ku jira…